Ukubhekisisa Isayensi Yezincwadi Zesayensi e-Afrika Ngokufinyelela Okuvulekile - I-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJohanssen Obanda no Abdul Abdul Tsanni on I-8th July ngo-2020 I-8th July ngo-2020
Vula ukufinyelela (OA) iqoqo lezimiso kanye nohlu lwemikhuba lapho imiphumela yokucwaninga isatshalaliswa online, mahhala yezindleko noma ezinye izithiyo zokufinyelela. I-AfricArXiv kanye ne-African Science Literacy Network (ASLN) babambisene ukukhuthaza ukulethwa kwezindatshana kwi-KiaArXiv kanye nokuhunyushwa kwezindatshana ukubenza batholakale emphakathini wase-Afrika ohlukene ngezilimi.
Isungulwe ngoJuni 2018, i-AfricArXiv isebenza njengesibambiso sokuqala semiphumela yemfundo evela kososayensi base-Afrika kanye nososayensi abangama-Afrika abasebenza ngezihloko zase-Afrika. I-AfricArXiv ibekelwe ukusheshisa nokuvula ucwaningo kanye nokubambisana phakathi kososayensi base-Afrika nokusiza ekwakheni ikusasa lokuxhumana ngezifundiswa.
Isithombe: Inethiwekhi ye-African Science Literacy Network
Inethiwekhi ye-Africa Science Literacy Network (ASLN) ukusebenzisana phakathi kososayensi nezintatheli, okwethulwe ngo-Okthoba 2019 eNigeria ngo I-TReND e-Afrika, ukusekela ukuxhumana okuningana kwesayensi emphakathini wonke. I-ASLN isebenza ukuqwashisa ngokubaluleka kwesayensi ezimpilweni zethu, emphakathini kanye nekusasa layo, ichitha imibono eyiphutha yesayensi iphakamise nembali yocwaningo lwase-Afrika. Lo msebenzi usiza ukuvala igebe phakathi kwesayensi, umphakathi nenqubomgomo, esikholelwa ukuthi izosiza ukwenza lula ukukhuphuka kwe-Afrika njengamandla amakhulu esayensi. Umgomo wokugcina wokucwaninga kwesayensi kufanele ube nomthelela emphakathini. Kodwa-ke, ucwaningo olushicilelwe kaningi luphela ngemuva kwamakhokhethi, ngenxa yalokho, lubeka umthelela ekutholakaleni komphakathi. Ngalobu budlelwano, sethemba ukukhuthaza ukufinyelela ocwaningweni oluvela e-Afrika kanye nezintatheli zethu, ukuqwashisa ngokubaluleka kwalolu cwaningo olwenzelwe umphakathi kanye nalabo ababambe iqhaza abathintekayo.
Ulwazi lwesayensi ingachazwa ngezindlela ezahlukahlukene. Enye yalezo zincazelo kuzoba: uhla lwamakhono namakhono adinga ukuthuthukiswa ukuthola, ukuqonda, ukuhlola kanye nokusebenzisa imininingwane, kubandakanya amakhono wokuqonda imiqondo yesayensi nokuqukethwe (Muir, J, (2016) Yini iSayensi Literacy?). Kubalulekile ukuqaphela indima edlalwa ukwabiwa kolwazi lwasendaweni kanye nokuzibandakanya komphakathi ekuhleleni izifundi nemiphakathi emazweni ase-Afrika ngokwesayensi. Ukungenelela okuningi kwamazwe amaningi kuvame ukuthatha isiNgisi, isi-Arabhu noma isiFulentshi. Kodwa-ke, imizamo yokufunda isayensi ngokusebenzisa ukuxhumana ngomlomo, umbhalo olula, ukugqwayiza ngolimi lwendawo kunokubamba iqhaza okukhulu, ukuzibandakanya, kanye nomthelela. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kolimi lwasendaweni kwisiko lendawo yasendaweni akunakubekelwa phansi.
Amathuba okufunda impilo yonke ezimeni ezingekho emthethweni nawo ayadingeka. Njengoba kunikezwe ukukhula okwandayo kwesayensi nobuchwepheshe emiphakathini yanamuhla, imfundo ehlelekile kufanele ihlomise abantu abaningi ukuthi bakwazi ukufunda ngokwesayensi kepha kubantu abangahlomulanga kulokhu kuze kube manje, umbuzo uwukuthi igebe lolwazi lingagcwaliswa kanjani? Kungenzeka yini ukuthi ucabange ngokuya ngokuhlomisa abantu abadala 'ngebhokisi lamathuluzi' eliyisisekelo lolwazi namakhono mayelana nesayensi nezobuchwepheshe? Lokhu kungenzeka ukuthi kuphumelele uma imizamo ihlobene nezinkinga ezithile ezihambelana nempilo yansuku zonke yabantu nemiphakathi ezindaweni zabo. Ngokufisayo, imfundo yesayensi, kuzo zombili izilungiselelo ezihlelekile nezingahlelekile, inganikela kakhulu ekuqondeni isayensi nasekukhuphuleni ulwazi lwesayensi.
I-AfricaArXiv isebenza ukuvusa ucwaningo lwezezimali ngaphakathi ezwenikazi kanye nasemazweni omhlaba nezikhungo zocwaningo phesheya kwezilwandle ngokuhlinzeka ngokugcinwa okuqondile kumphakathi wokucwaninga wase-Afrika. Izinzuzo eziningi zesikhundla sokuqala se-Afrika zifaka phakathi ukubonakala kokuphuma kokucwaninga kwase-Afrika, okukhuthaza ukusebenzisana kuwo wonke amazwekazi, nethuba lokwabelana ngemiphumela yocwaningo ngezilimi zase-Afrika.
“I-TReND e-Afrika ijabule kakhulu ukuzibandakanya ne-AfricaArXiv ne-ASLN ukukhuthaza nokukhulisa ukuxhumana kwezesayensi nokuvula isayensi. Isayensi exhaswa ngumphakathi ikhiqiza ulwazi olungokwabo bonke. Ukuqinisekisa ukuthi abaxhumanisi besayensi baxhumana nabaphenyi abashicilela imibhalo yokuqala kanye nezindatshana zokufinyelela eziqinisekisa ukuthi umphakathi oyinhloko unolwazi kahle ngentuthuko yesayensi kuqala! Manje kunanini ngaphambili sidinga ukuqiniseka ukuthi imininingwane isatshalaliswa kubo bonke banikezwa wonke umuntu ithuba lokuthi bazi futhi baziphephe. ​​” Samyra, Umxhumanisi Jikelele we-TReND
Njengososayensi, faka isimaphambili sakho kwelinye lamapulatifomu amathathu ozakwethu esisebenza nawo https://info.africarxiv.org/submit/
Sicela ufunde futhi umhlahlandlela wethu wokuhambisa: https://info.africarxiv.org/before-you-submit/
Uma unentshisekelo ngokusetshenziswa kwezilimi zendabuko zase-Afrika kwiSayensi ungavolontiya ukuhumusha nathi izifushaniso nezifushaniso zemibhalo yesandla ekwabelwana ngayo kwi-KiaArXiv.
Ukufinyelela okuvulekile: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
Ulwazi Lwesayensi: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_literacy
Muir J, (2016) Kuyini iSayensi Literacy? - https://blogs.glowscotland.org.uk/glowblogs/eportfoliojm/2016/02/22/what-is-science-literacy/
(umbhali / 2017) Isayensi yokufunda nokubhala emazweni asathuthukayo: Ucwaningo lomhlaba: - Umbiko weSifingqo, http://www.nida-net.org/documents/8/SL_Researcht_Report_Final.pdf
Categories:	UkubambisanaUkuhluka KwezilimiVula UkufinyelelaVula iSayensi